Kumirira Godot: pendi iyo inoratidza chisina chikonzero chekuva munhu | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | 16/09/2021 00:48 | Yakagadziridzwa ku 16/09/2021 01:18 | Vanyori, Mabhuku, Theater
Kumirira Godot (1948) mutambo weiyo isina musoro theatre yakanyorwa neIrishman Samuel Beckett. Pakati pezvose zvakaunganidzwa zvemunyori, uyu "Tragicomedy muzviito zviviri" -seizvo zvaive nemusoro wenyaya- ndicho chinyorwa chine kuzivikanwa kukuru pasi rese. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ndicho chidimbu chakazivisa zviri pamutemo Beckett munzvimbo yemitambo, uye zvakamupa iye 1969 Mubayiro weNobel weZvinyorwa.
Chinhu chinonakidza ndechekuti Beckett - anofarira zvemitauro uye philologist - akashandisa mutauro wechiFrench kunyora iri basa. Kwete pasina bhuku racho yemusoro wenyaya Yakaburitswa pasi pechinyorwa chinotaura chiFrench Les Éditions de Minuit, makore mana mushure mekunyorwa (1952). Kumirira Godot yakatanga kuratidzwa padanho musi waNdira 5, 1953, muParis.
1 Pfupiso yebasa
1.1 Chekutanga chiito
1.1.1 Godot: chikonzero chekumirira
1.1.2 Kuuya kwaPozzo naRucky
1.1.3 Meseji inoodza moyo inorebesa kumirira
1.2 Chechipiri chiito
1.2.1 Kudzoka nekuchinja kukuru
2 Kumirira kuongororwa kweGogdot
2.1 Iko kugona kwekureruka
2.2 Chero chii chinoitika, hapana chinochinja magumo evarume
2.3 Godot haasi Mwari ...
2.4 Hupenyu: chiuno
3 Makomendi kubva kuvatsoropodzi vane ruzivo nezve Kumirira Godot
4 Kumirira Godot trivia
5 Kumirira zvirevo zvaGodot
Beckett akapatsanura basa nenzira yakapusa: muzviito zviviri.
Muchikamu chino, zano rinoratidza Vladimir naEstragon vachisvika padanho rakaumbwa ne «Nzira iri mumunda. Muti. - Zvinhu izvi zvinochengetedzwa pabasa rese - Mamwe masikati. " Mavara anopfeka scruffy uye kusvibiswa, izvo zvinoita kuti zvifunge kuti vangave vanhu vasina pekugara, nekuti hapana kongiri inozivikanwa pamusoro pavo. Kwavanobva, chii chakaitika munguva yavo yakapfuura uye nei vachipfeka saizvozvi chakavanzika chakazara.
Godot: chikonzero chekumirira
Chii chinonyatso kuzivikanwa, uye basa rine basa rekuita kuti rizivikanwe chaizvo, ndizvozvo vanomirira imwe "Godot."". Ndiani iyeye? Hapana anozivaNekudaro, iwo rugwaro runopa uyu unigmatic hunhu nesimba rekugadzirisa matambudziko evaya vakamumirira.
Kuuya kwaPozzo naRucky
Panguva ivo vakamirira uyo asingasvike, Didi naGogo - sekuzivikanwa kunoita protagonists - nhaurirano mushure mekutaurirana kudzungaira zvisina maturo uye kunyura mukusava chinhu kwe "kuve". Mushure mechinguva, Pozzo - muridzi uye ishe wenzvimbo yavanofamba, sekureva kwake - uye nemuranda wake Lucky vanobatana nekumirira.
Pozzo inodhonzwa se uyo akapfuma anozvirumbidza. Paanosvika, anosimbisa simba rake uye anoedza kuratidza kuzvidzora uye kuvimba. Nekudaro, sekufamba kwenguva mumakuhwa, zvinova pachena kuti - sevamwe vatambi - murume wemamirioni akabatikana mudambudziko rakafanana: haazive chikonzero kana chikonzero chekuvapo kwake. Rombo, iye, anozviisa pasi uye akavimbika, muranda.
Meseji inoodza moyo inorebesa kumirira
Kana zuva rave kuda kupera pasina chinoratidza kuti Godot achasvika, chimwe chinhu chisingatarisirwi chinoitika: mwana anoonekwa. Uyu anosvika padhuze nekudzungaira kwaPozzo, Rombo, Gogo naDidi y anovazivisa kuti, Hongu OK Godot haauye, Zvinonyanya kuitika ita chimiro zuva rakatevera.
Vladimir naEstragon, Mushure memashoko iwayo, vanobvumirana kudzoka mangwanani. Ivo havaregedze pane yavo hurongwa: ivo vanoda, chero zvodii, kusangana naGodot.
Sezvazvakataurwa, mamiriro akafanana anosara. Muti, nematavi awo akasuwa, unoyedza kudzika kuitira kuti ugone kushandiswa uye kugumisa kufinhwa uye maitiro. Didi naGogo vanodzokera kunzvimbo iyoyo uye vanodzokorora ma ravings avo. Zvisinei, chimwe chinhu chakasiyana chinoitika zvichienzaniswa nezuva rapfuura, uye ndiko kuti vanotanga kuona kuti kwaive nezuro, sezvo zviratidzo zvekuti vaivepo zvinoonekwa.
Unogona kutaura ipapo yekuziva kwenguva pfupi, kunyangwe hazvo, zviripo, zvese zvinodzokororwa; rudzi rwe "Groundhog Day."
Kudzoka nekuchinja kukuru
Lucky nashe wake vanodzoka, zvisinei, ivo vari mumamiriro akasiyana zvakanyanya. Muranda izvozvi mbeveve, uye Pozzo anotambura nehupofu. Pasi peiyi panorama yeshanduko huru, tariro yekuuya inopfuurira, uye pamwe nayo nhaurirano dzisina musoro, dzisina musoro, mufananidzo weusina musoro wehupenyu.
Kungofanana nezuro wacho, mutumwa mudiki anodzoka. Zvisinei,, paakabvunzwa naDidi naGogo, iyo mwana anoramba kuva navo nezuro. Hongu dzokorora zvakare inhau dzakafanana: Godot haauye nhasi, asi zvinokwanisika kuti mangwana achauya.
Hunhu vanoonana zvakare, uye pakati pekuora mwoyo nekudemba, Vanobvuma kudzoka zuva rinotevera. Muti uri wega unoramba uripo semucherechedzo wekuzviuraya senzira yekubuda nayo; Vladimir naEstragon vanozviona uye vanofunga nezvazvo, asi vanomirira kuti vaone kuti "mangwana" chii chichaunza.
Nenzira iyi basa racho rinoguma, kupa nzira kune chingave chiuno, chinova chinhu kupfuura zuva nezuva munhu uye chii zvizere ake kurovedza kuziva anodana "upenyu."
Analysis of Kumirira Gogdot
Kumirira Godot, pachezvayo, iko kusarudzika kunotikwevera isu chii zuva nezuva zuva revanhu. Izvo zvakajairika mune zviito zviviri zvechinyorwa - Kunze kwekuchinja kumwe kana kumwe apo neapo— iri kuramba ichidzokorora izvo hazviite chinhu kunze kwekuratidza kufamba kusingakanganisike kweumwe neumwe, nhanho nhanho, kuguva rake.
Iko kugona kwekureruka
Zviri mukureruka kwebasa, kunyangwe richiita serisinganzwisisike, panogona kugona kwake, pane hupfumi hwake: pendi pamabhodhi inoratidza kusanzwisisika kunotenderedza murume.
Kunyangwe Godot - akamirirwa kwenguva refu, akamirirwa kwenguva refu - asingatomboonekwe, kusavapo kwake kunozvipa kumbono yedambudziko rekupusa kwehupenyu hwevanhu. Iyo nguva padanho inogamuchira chikonzero chayo nezviito izvo, kunyangwe zvichiratidzika kunge zvisina musoro, zvaisazove nani kana kutonyanya kupfuura vamwe, nekuti iye anotarisirwa, nenzira imwecheteyo, haazouyi.
Chero chii chinoitika, hapana chinochinja magumo evarume
Mukutamba zvakafanana kuseka kana kuchema, fema kana kwete, tarisa masikati achifa kana muti kuoma, kana kuve mumwe nemuti nenzvimbo. Uye hapana chimwe cheizvozvo chinoshandura yakasarudzika magumo: kusvika kwekusavapo.
Godot haasi Mwari ...
Kunyangwe mukati memakore ese pakave nevaya vanoti Godot ndiMwari pachake, Beckett akaramba kufunga kwakadaro. Zvakanaka, kunyangwe ivo vachizvibatanidza muchimiro nekumirira kwevanhu kwekuenderera kwehuMwari mutsika dzakasiyana, vachishandisa zvinongoitika zvakafanana neshoko reAnglo Mwari, chokwadi ndechekuti munyori akataura izvozvo zita racho rakabva kuinzwi reFrancophone godillot, ndokuti: "bhuti", muchiSpanish. Naizvozvo, Didi naGogo vaitarisira chii? Pasina, tariro yemunhu yakanangana nekusaziva.
Uyewo kwave kune avo vakabatanidza mutumwa waGodot nemesiya wetsika dzechiJudhao-chiKristu, uye zvine musoro ipapo. Asi tichifunga zvakataurwa nemunyori, dzidziso iyi inoraswa zvakare.
Kuguma hakugone kuenderana zvakanyanya nezvimwe zvese zvakasimudzwa pabasa, zvirokwazvo. Saka unodzokera pakutanga, asi iwe unowana kuziva kuti uri, kuti kwaive nekumirira zuro, sekunge kana kuwanda kweropa kupfuura nhasi, asi kwete zvishoma pane mangwana. Uye uyo anoti anofanirwa kuuya anoramba kuti akati akazvitaura nezuro, asi anovimbisa kuti zvinogona kuitika mangwana ... zvichingodaro, kusvikira mweya wekupedzisira.
Makomendi kubva kune nyanzvi vatsoropodzi pa Kumirira Godot
«Hapana chinoitika, kaviri", Vivian Mercier.
“Hapana chinoitika, hapana anouya, hapana anoenda, zvinotyisa!«, Anonymous, mushure mekutanga muParis muna 1953.
"Kumirira Godot, zvinonzwisisika pane zvisina musoro". Mayelit Valera Arvelo
Curiosities of Kumirira Godot
Mutsoropodzi Kenneth burke, mushure mekuona mutambo, Akataura kuti kubatana pakati paEl Gordo naEl Flaco kwaive kwakanyanya kufanana neyaVladimir naEstragon. Izvo zvine musoro zvine musoro, tichiziva kuti Beckett aifarira Mafuta neakaonda.
Pakati pematangiro mazhinji ezita iri, pane imwe inoti zvakaitika kuna Beckett paainakidzwa neTour de France. Kunyangwe nenyaya yekuti mujaho wainge wapera, vanhu vaive vachiri kutarisira. Samuel akabvunza kuti: "Ndiani wauri kumirira?" uye, vasingazeze, vakapindura kubva kune vateereri "Kuna Godot!". Chirevo ichi chaireva mukwikwidzi uyo akange asara kumashure uye aive achiri kuuya.
Ose mavara Vanotakura ngowani ye ngowani ngowani. Uye izvi hazvisi masanga Beckett aive fan of Chaplin, saka yaive nzira yake yekumukudza nayo. Uye ndezvekuti mubasa mune zvakawanda zvema cinema chinyararire, zvizhinji zvezvinotaurwa nemuviri, nezve izvo zvinotaurwa nerunyararo, pasina kuzvidzora. Panyaya iyi, director theatre Alfredo Sanzol akataura mubvunzurudzo na Nyika kubva kuSpain:
“Zvinosetsa, anotsanangudza kuti Vladimir naEstragon vanopfeka ngowani dzemakombi uye ndosaka mumatanho ese ivo vachigara vakapfeka ngowani dzemakombi. Ndakanga ndichiramba. Icho chokwadi ndechekuti ini ndakaedza nguwani uye mamwe marudzi eheti, asi hazvina kushanda. Kusvika ndaraira mapaundi uye, ehe, ivo vaifanira kupfeka makombi. Ngowani yekudyira ndiyo Chaplin, kana kuSpain, Coll. Ivo vanodenha yakawanda yekutumira. Chaive chiitiko chakandininipisa kwandiri ”.
Nguva Kumirira Godot ndiyo yaive yekutanga foray ye Beckett munhandare, pakanga paine kuyedza kwekare kwakatadza kuitika. Mumwe wavo waive mutambo pamusoro paSamuel Johnson. Imwe yacho yaive Eleutheria, asi chakaraswa mushure mekunge Godot abuda.
Quotes ye Kumirira Godot
“Takachengeta musangano, ndizvozvo chete. Isu hatisi vatsvene, asi isu takachengeta musangano. Vangani vanhu vanogona kutaura zvakafanana?
“Misodzi yenyika haichinje. Kune mumwe nemumwe anotanga kuchema, mune chimwe chikamu kune mumwe anomira kudaro ”.
“Ndinoyeuka mamepu eNyika Tsvene. Muvara. Zvakanakisa. Gungwa Rakafa rakanga rakachenuruka bhuruu. Ndaive nenyota ndakangozvitarisa. Akandiudza: tichaenda ikoko kunopedza nguva yedu yehusiku. Tichashambira. Tichafara ".
"VLADIMIR: Neizvi tapfuura nguva. ESTRAGON: Zvingave zvakafanana, zvakadaro. VLADIMIR: Ehe, asi zvishoma kukurumidza ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Kumirira Godot